Krabi, isimanga eThailand | Izindaba Zokuhamba
Krabi, kazi eThailand
UMariela Carril | | Iziqondiso, I-Tailandia
I-Tailandia inezindawo eziningi ezinhle zemvelo. Uma kukhulunywa ngemvelo, iThailand ngokungangabazeki iyipharadesi e-Southeast Asia, futhi Krabi enye ye izindawo ezithandwa kakhulu. IKrabi yidolobha nesifundazwe futhi ngenxa yalokho inamapaki amaningi emvelo, ugu oluhle kanye neziqhingi ezimbalwa eziwile esibhakabhakeni.
UKrabi ungumnikazi wamakhadikhadi amaningi athandwa kakhulu futhi aziwa kakhulu eThailand ngakho-ke uma uhlela uhambo, bhala phansi yonke imininingwane esinayo namuhla ngayo. indawo yamabhishi, ezemidlalo yelanga neyamanzi.
2 Ezokuvakasha eKrabi
Ngenye yezifundazwe zaseThailand, al eningizimu yezwe nasogwini. Umfula wegama elifanayo uthululela lapha futhi ogwini uqobo yiPhang Nga Bay neziqhingi zalo ezinhle. Vele, ngobuhle bemvelo obunjalo, ezokuvakasha zingumsebenzi ophambili kule ndawo.
Kusukela ngo-1999 idolobha linesikhumulo sezindiza samazwe omhlaba ngakho-ke ungaya ngqo lapho noma uhambe ngomzila i- Amakhilomitha angama-800 ayihlukanisa neBangkok. Yize kuyindawo yezivakashi, akukude kakhulu ukuthi ezokuvakasha zifike lapha, kepha uzothola amahhotela amakhulu noma izindlu eziqashisayo zohlobo lwe-bungalow.
Ngisho, okunikezwayo ngendawo yokuhlala kuhlukahlukene ngokwamanani nezitayela futhi, ngokujwayelekile, konke kutholakala eduze kwamabhishi. Ungahlala edolobheni noma emabhishi asePhra Nang, eRai Ley nase-Ao Nang. IKrabi ihlukaniswe izifunda eziyisishiyagalombili ezinabantu abangama-344, 61. Kuyintaba kanti isifundazwe sifaka iziqhingi eziyi-130 ezinemihlume nemithi yeCassis, umango, izintende, izihlahla zenjoloba ngisho nezihlahla zekhofi.
Ngale kwamabhishi, eKrabi inamapaki emvelo nendawo enhle kangaka yokuphumula. Kukhona ifayela le- I-Hat Noppharat Thara-Ko Phi National Park, ingxenye ezwekazini, ingxenye eziqhingini, i- Iziqhingi zasePhi Phi, yaqoshwa kuphi E bhishi noLeo Di Caprio, Isibonelo, yena IKo Lanta National Park ngeziqhingi zamakhorali nokunye okuningi.
Ngakho, Yini ongayenza ku-krabi? Ukudilika emanzini, ukubuka izinyoni, ukugeza ilanga, ukuya emicimbini yamasiko, ukuphumula kakhulu futhi nokuba ne-spa ehhotela. Mayelana diving Kunezinhlaka eziningi ongaziqasha ukuze uzithokozise noma uzenze ngobunyoninco. Lokho kusho ukuthi, kunezivakashi ezingafuni ukuchitha amahora ayishumi esikebheni ukuze zicwilise kabili ngakho-ke ngaleyo ndlela mhlawumbe uhambo lwe snorkel noma isikebhe esilula kakhulu sigibela ukubhukuda hhayi okunye okuningi.
Izindawo zokuntywila ziyiziqhingi zasendaweni i-Ao Phra Nang, i-Phi P hi Islands National Marine Park, i-King Cruiser Wreck, i-Anemone Reef, ne-Shark Point, ngokwesibonelo. Ukuvakashela lezi zindawo kunohambo olufushane olusuka ngo-12 bese lubuya ngo-2 ntambama. Uhambo olude luhamba ekuseni lubuye phakathi kuka-6 no-8 ebusuku.
Njengoba sishilo ngaphambili ungakugwema njalo ukudilika nokushayela ngesikebhe futhi ulungile hamba phakathi kweziqhingi bese ubhukuda kancanenoma. Cishe lapha kuneziqhingi neziqhingana ezingaba ngu-200. Indawo enhle indawo ye- iziqhingi zaseKoh Rock, exhunywe ngumzila wamakhorali okuyindawo enhle ongayivakashela. Kukhona futhi i- Isiqhingi sogebhezi noma i amawa akhazimulayo eKoh Talabeng. Noma ngabe uya kuphi ungahlala uqasha isikebhe amahora ambalwa noma usuku lonke.
La ugu olunamadwala eKrabi Ukumema ukuthi uhambe futhi ukhuphuke, ikakhulukazi iphrofayili yenhlonhlo yase Railway noma ibhishi elikude lase Tonsai. Yini amasayithi! Omunye umsebenzi odumile yi- kayak, okuthile okuvumela ukwazi imihume yasolwandle nokwakheka kwamatshe okungajwayelekile, amachibi afihlekile, imihlume ethokozisayo. Ngalo mqondo, enye yezindawo ezithandwa kakhulu nge-kayaking yi-Ao Thalane.
I-Emerald Pond kungenye indawo edumile, e IThung Teo Forest Nature Park. Lapha kunemizila phakathi kwezimpophoma ongadlula kuzo futhi uma uthanda ukuhamba ungahlala uhlola imigede esezansi kweKha Khanab Nam noma ukhuphukele endaweni ebukekayo yeKh Phi Phi.
Kepha kunamathempeli azungeze iKrabi? Yebo, kukhona amathempeli nezindawo ezingcwele. Okudume kakhulu yi ITiger Cave Temple noma iWat Tham Sua. Ukuze ufinyelele kuso kufanele ukhuphuke njengezitebhisi eziyinkulungwane kanti phezulu kunezithombe zikaBuddha nama-pagodas nemigede ozoyihlola. Edolobheni uqobo ungavakashela igquma lase Wat kaew korawaram ngemidwebo eminingi yokubumba.
Kepha ngaphandle kokungabaza i amabhishi e-krabi zingumazibuthe oyinhloko wezinkulungwane zezivakashi ezifika isizini ngayinye. Isifundazwe sonke sinamabhishi amahle kakhulu okuchitha usuku esiswini esihlabathini esimhlophe, aqabula ngezikhathi ezithile emanzini aluhlaza.
Phakathi kwamabhishi athandwa kakhulu kukhona lawo I-Ao Nang neLong Beach, eKoh Lanta nakuleyo ye- ITonsai Bay, eKoh Phi Phi. Kunoma iluphi lalawa mabhishi kunemisebenzi enikezwayo nezinsiza, kepha uma ufuna okuthile okuthe xaxa ngokwengeziwe ungaya ePra nang Beach, Tub Kaek, Kantiang Bay noma eLaem Tong.
I-Thailand inezimpilo eziningi zasebusuku lapha futhi lokhu kugxilwe ngaphezu kwanoma yini ekuyo I-Ao Nang, ibhishi elikhulu ezwekazini, imigoqo, amakilabhu, izindawo zokudlela, abantu yonke indawo. kusuka entweni ebabazekayo kunalokho kube lula ibha esihlabathini. Ungaqala kusihlwa uhamba nge imakethe ye-krabi, ngoLwesihlanu, ngeMigqibelo nangeSonto, umgwaqo uvaliwe ezimotweni nakho konke okugcwele abathengisi, futhi ukusuka lapho ungahlala esidlweni sakusihlwa udanse noma uphuze kuze kuse.
Uma usondela ekupheleni konyaka ungayijabulela i- Umkhosi weKrabi okwenzeka ngoNovemba futhi kugubha ngqo ukuvulwa kwesizini yezivakashi ngemincintiswano yezemidlalo yamanzi, imibukiso yamasiko nokunye. Kepha akusisona kuphela isikhathi sonyaka lapho kunemikhosi noma imicimbi yamasiko: ngoDisemba 5 usuku lokuzalwa lwenkosi ligujwa kuzwelonke, kusukela ngo-Ephreli 13 kuya ku-15 kunamasiko amaningi namasiko emoyeni kusukela ngokwekhalenda IsiThai unyaka omusha wamaLunar futhi zonke izithombe zeBuddha ziyagezwa.
Bese kuthi uMeyi 15 kube usuku lokuzalwa lukaBuddha kanti izinyanga zikaJuni nezikaNovemba izinyanga zenyanga, kanye no-Agasti 12, okuwusuku lokuzalwa kwendlovukazi futhi ngoNovemba Umkhosi weLoo Krathong. Ukuzijabulisa!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Krabi, kazi eThailand
Izinto okufanele zenziwe eNew York: Iya kumculo we-Broadway